70 Sanno ka hor iyo Maanta Soomaali waa isku Qaab! W/Q: Xasan Aadan Hoosow | Laashin iyo Hal-abuur
70 Sanno ka hor iyo Maanta Soomaali waa isku Qaab! W/Q: Xasan Aadan Hoosow
70 Sannadood ka hor iyo Maanta Soomaali waa isku Qaab!
Shidaal Baaristii ugu horreysay Dhulka Soomaaliya: Sir iyo caddeymo ay qoreen CIA iyo Chigaco Tribune oo faahfaahinaya waxa dhacay! Sida uu qoray wargeyska Chicago Tribune cadadkiisa soo baxay March 22, 1948, Itoobiyadii Haile Sellasie waxay heshiis 50 sannadood, oo dhammaan xuquuqda shidaal baarista la wareejinayo, la gashay shirkadda Sinclair Oil Company ee Ameerikaanku lahaa sannadkii 1945 si ay shidaal uga baarto dhulka Soomaali Galbeed (Ogadenia). Saddex sannadood ka hor, Haile Sellaise waxaa xukunka ku soo celiyay Ingiriiska kaddib markii uu ku duulay, xukunkana ka tuuray Talyaaniga. Heshiiskaas oo u dhaxeeyay Itoobiya iyo shirkadda Maraykanka laga la tashadayna gumeysiga Ingiriiska ee gobolkaas joogay, waxaa ka carooday shacabka deegaanka iyo ururkii gobonnim doonnka SYL
Sida ku cad qoraallada Hey’adda Sirdoonka Maraykanka (CIA) ee la qoray 24 October 1947, ururkii SYL ee uu markaas madaxda u ahaa Xaaji Maxamed Xuseen, ayaa August 6, 1947 waxay warqad u direen taliyaha Ingiriiska ee gobolkaas, asagoo u sheegay in Soomaalida ay Itoobiya ka xuroobi doonnaan, Sinclair-na ay Soomaali mooye cid kale heshiis la gali karin.
Isla bishaas August 8-9, waxaa socda kacdoon ay dhallinyaradu sameynayaa, sida ku cad Chicago Tribune iyo CIA qoraalkeeda. Dhallinyada gawaarida shirkada oo wada geologist-yaasha ayay ku hareereeyeen meel u dhow Dhagaxbuur, waa xabadeeyeen, qaarkood waa la xiray, booliska ayaa kala eryay. Kacdoon culus ayay qaadeen.
Ayadoo ay SYL-na ay leedahay Soomaali xur ah keliya ayaa heshiis lala geli karaa, dhalinyaradana ay mudaaharaadayaan, waxaa isla bishaas August 14, 1947 oday dhaqameedkii Wardheer Sultan Rafleh Guuleed, wuxuu la shiray Guddoomiyihii Degmada (DC) ee Ingiriiska ahaa, wuxuuna weydiistay in shidaalka la helo, gunnadiisa (royalty) wax laga siiyo, DC-gii wuu ku ganacsayray. Markuu hungoobay codsigiisa, maalintii xigtay Suldaanka wiilkiisa Duulane ayuu ku daray wakiilkii SYL ee deegaankaas Maxamed Rashiid, si ay Sinclair toos ula kulmaan uguna sheegaan in ay dhulka Soomaali leedahay. Ayadoo shirkaddii la la fadhiyo ayay is khilaafeen, Dulane wuxuu yiri gunnada shidaalka Suldaanka ayaa leh, halka Rashiid uu yiri SYL ayaa leh.
DC- Ingriiska ahaa oo shirkaas ka war helay ayaa amray in aan Soomaali dambe shirkaddu la kulmi karin asagoo aan goob joog ahayn.
Markii labada isku day lagu hungoobey, Sultan Rafle wuxuu saxiixay warqad ay wada qoreen guddoomiyihii SYL Xaaji Maxamed Xuseen September 1947, taas oo looga dalbanaayo shirkadda in ay ujeeddadeeda, shaqaalaheeda caddeyso, fasax aan Soomaali ka imaanna ku shaqayn karin, haddii kale Qaramada Midoobay ay ku dacweyn doonnaan.
Markii uu Suldaanka warqaddaan saxiixay, Marquis W.G Serra, oo Sinclair madaxdeeda ka mid ahaa, wuxuu bilaabay qorshada ah in beelaha Soomaalida la kala furfuro. Roger McDonald ayaa arintii u sheegay Ingiriiska, Sinclair shaqadii ayay ka fadhiisiyay.
Wasiir British ah ayaa kaddib ku amray shirkadda:
1- Marquis Serrra oo jinsiyaddiisa ka been sheegay iyo labo nin oo beelaha kala furfuraya shaqada laga saaro.
2- In heshiiska ay Itoobiya la galeen ay keennaan.
Sidoo kale September 26, 1947 ku xigeenkii jandarmada British-ka ayaa ku amray shirkadda:
1- In dhammaan wixii tarjumaan ah ee British Somaliland ka socda lagu beddelo kuwo uu asaga keensado.
2- In isku duwaha xafiiska Geologiyadda shaqada laga saaro.
3- In dhammaan wiilasha Isaaqa ah ee u shaqeeya lagu bedelo kuwo kale, ama Muqdisho laga keenno.
Sida uu qoray Chicago Tribune, dhallinyaradii mudaaharaadka ma joojin, illaa odayaasha ay ku soo biiraan, arrintiina ay noqoto kacdoon cirka isku shareeray. Horraantii 1948, 21 sarkaal oo ciidan iyo diplomaasiyiin British ah isugu jiray, ayaa culeyska markii ay xamili waayay (sida ay sheegeen) waxay shaqadii ka joojiyeen shirkaddii Sinclair.
Qoraal dad Soomaali ah ay qoreen ayaan arkay oo la leeyahay Sultan Rafle wuu la dagaalamay Sinclair, laakiin sida CIA qortay waxaa muuqata in uu rabay oo keliya in qarashka shidaalka qeyb laga siiyo, halka SYL ay ku doodaysay in fasax Soomaali mooyee cid kale laga qaadan karin. Wixii run ah Ilaah baa og.
Shidaal hanti iyo halaag ba wuu yahay, in lagu halaagsamo waa sahal, in hantiile lagu noqdana shaqo culus ayay u baahan tahay.